Niasa nanatsara ny zava-bitan'ny organika isan-karazany ny tranonkala - nanomboka tamin'ny tranokala mega misy pejy an-tapitrisany, hatramin'ny tranokala ecommerce, hatramin'ny orinasa kely sy eo an-toerana, misy ny dingana raisiko izay manampy ahy hanara-maso sy hitatitra ny zava-bitan'ny mpanjifako. Eo amin'ireo orinasa marketing nomerika, tsy mino aho fa tsy manam-paharoa ny fomba fiasa… saingy lalina kokoa noho ny fikarohana organika mahazatra (SEO) masoivoho. Tsy sarotra ny fomba fiasako, saingy mampiasa fitaovana marobe sy famakafakana kendrena ho an'ny mpanjifa rehetra izy.
YouTube Channel Analytics - YouTube no motera fikarohana lehibe indrindra ary tsy misy fialantsiny tsy hananana fanatrehana ao. Misy taonina iray karazana horonan-tsary fa tokony hiasa ny orinasanao hitarika fifamoivoizana biolojika mankany amin'ireo horonantsary sy fivezivezena referral avy amin'ny YouTute mankany amin'ny tranokalanao. Tsy lazaina intsony fa hanatsara ny traikefan'ny mpitsidika anao amin'ny tranokalanao manokana ireo horonan-tsary ireo. Izahay dia manandrana manana horonan-tsary mifandraika amin'ny pejy rehetra amin'ny tranokala fandraharahana hanararaotana ireo mpitsidika mankasitraka azy noho ny famakiana fampahalalana taonina ao anaty pejy na lahatsoratra.
SEMrush - Betsaka ny lehibe SEO fitaovana any ivelany ho an'ny fikarohana biolojika. Nampiasa SEMrush nandritra ny taona maro aho, noho izany dia tsy manandrana manodikodina anao amin'ny iray amin'ireo hafa any ivelany aho… tiako ho azo antoka fa azonao tsara fa ianao dia tsy maintsy manana fidirana amin'ireo fitaovana ireo hanaraha-maso marina ny zava-bitan'ny fikarohana nataonao. Raha manokatra navigateur ianao ary manomboka mijery ny valin'ny valin'ny motera fikarohana (SERPs) mahazo valiny manokana ianao. Na dia tsy tafiditra ao anaty varavarankely manokana ianao, ny toerana misy anao dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny valiny azonao ao amin'ny Google. Fahadisoana iraisana fahitako ny mpanjifa ity rehefa manamarina ny zava-bitany manokana… miditra izy ireo ary manana tantaram-pikarohana izay hanome valiny manokana izay mety tsy hitovy amin'ny mpitsidika antonony. Ny fitaovana toa an'io dia afaka manampy anao hamantatra ireo fotoana mety hampidirana mpampita vaovao hafa toa Video, na mivoatra snippets manankarena ao amin'ny tranokalanao hanatsara ny fahitana anao.
Misy orinasa mifaninana amin'ny orinasanao. Izy ireo dia mety manambola be amin'ny atiny sy SEO mba hitrandrahana amin'ny karoka mifandraika izay mifaninana aminao.
Isan'ny teny lakile isaky ny toerana - Ny fitomboan'ny laharam-pejy dia mitaky fotoana sy fotoana. Rehefa manatsara sy manatsara ny atin'ny pejinao ianao, mampiroborobo an'io pejy io ary mizara ny pejinao ny olona dia hitombo ny laharanao. Na dia tena manandanja aza ireo toerana 3 ambony ao amin'ny pejy 1 dia mety efa nanomboka niverina teo amin'ny pejy 10. Ireo pejy ireo dia tiako ho azo antoka fa voatanisa araka ny tokony ho izy ny pejin'ireo tranonkala rehetra ary mitombo hatrany ny laharam-pahamehako. Midika izany fa ny asa ataontsika ankehitriny dia mety tsy mandoa vola amin'ny fironana sy ny fanovana mandritra ny volana maro akory aza… fa azontsika atao ny mampiseho amin'ny mpanjifanay fa mamindra azy ireo amin'ny lalana marina izy ireo. Aza hadino ny mampizara ireto valiny ireto amin'ny marika mifandraika amin'ny marika tsy misy marika toy ny efa noresahina tetsy ambony.
Ny tatitra momba ny SEO mahazatra dia tsy hilaza ny tantara iray manontolo
Ho marin-toetra aho fa tsy mampiasa na inona na inona amin'ireo sehatra etsy ambony hamokarana tatitra mahazatra. Tsy misy orinasa roa mitovy ary tena tiako ny mijery akaiky kokoa ny toerana ahafahantsika mampiasa vola sy manavaka ny paikadintsika fa tsy manahaka ireo tranonkala mifaninana. Raha orinasa hyperlocal ianao, ohatra, ny fanaraha-maso ny fitomboan'ny fivezivezena amin'ny fikarohana iraisam-pirenena dia tsy tena hanampy, sa tsy izany? Raha orinasa vaovao tsy manam-pahefana ianao dia tsy afaka mampitaha ny tenanao amin'ireo tranokala mandresy ny valin'ny karoka farany ambony. Na na dia orinasa kely manana teti-bola voafetra ianao, dia manao tatitra fa tsy mitombina ny orinasa manana teti-bola amin'ny marketing an-tapitrisany.